Iphrinti Yokudla Umshini Wokunyathelisa Umkhiqizo China Manufacturer
Incazelo:Ikhekhe le-Printer Untuk,I-Harga Cake Printer,I-Photo Cake Printer System
Home > Imikhiqizo > Iphrinta yokudla > Iphrinta ye-Cake > Iphrinti Yokudla Umshini Wokunyathelisa Umkhiqizo
i-printer untuk cake iholela kumamodeli amasha amabhizinisi amasha, okungaba ukugqama okukhulu kakhulu kwezicelo eziningi ekhishini elisebenzayo, i-catering, i-confectionaries, i-café nama-bakeries. I-harga iphrinta iphrinta iphindze yenzelwe ukugqugquzela, ukujabulisa, imfundo, nokuveza ubuciko kokubili abancane nabadala ekhaya, ekhaya labahlengikazi kanye nemfundo ye-3d ikhekhe yamaprinta ezikoleni.
I-Shenzhen i-RFC Technology Development Co., Ltd iyinhlangano ye-SGS ye- photo cake i-printer system e-China, phakathi neminyaka eyishumi edlule, iphrinta yethu elishisayo yekhekhe iye yaba ngokusebenzisa ukuthuthukiswa kwezizukulwane ezingu-3. Manje singomunye wabakhiqizi abanolwazi kakhulu printer flatbed eChina .fo
Ikhasi elilodwa elidliwayo le-cake printer iphepha liyisizukulwane esisha semishini yokunyathelisa ye-digital tech. Ingakwazi ukukhipha isithombe esicacile se-digital esinebalabala, esingenawo amanzi, elangeni, ukuphikisana nesibindi futhi akuzange kuphele. Isebenzisa uhlelo lokunikezwa kweyinki oluqhubekayo futhi oluzenzakalelayo. Sebenzisa kalula, phrinta ngokushesha, izindleko eziphansi futhi zisetshenziswe kabanzi. Iphrinta yethu ephathekayo ingaphrinta ezinhlobonhlobo ezinjengezintambo ezinjenge-t-shirt, insimbi, iplastiki, izinkuni, i-porcelain, ingilazi, i-PVC, itshe, i-bamboo, i-crystal, isikhumba, isakhiwo, isambatho, i-textile, i-academy board nokunye okunye.
I-othomathikhi ephelele: Iphrinta ingashintsha ngokuzenzakalela ukuzenzekelayo ngokusekelwe kunamaqondo amaningana okuphakama.
Uhlelo lokuvikelwa: Lungavikela kusuka ekhanda lungabanjwa.
Iphrinti yokudla Ikhekhe le-Chocolate le-Candy Inkinobho edlayo Xhumana Nanje
Ikhekhe le-Printer Untuk I-Harga Cake Printer I-Photo Cake Printer System I-Coffee Printer Uk I-Coffee Printer Ink Iphepha le-Cake Printer Paper I-Coffee Printer Uae I-cheaper ye-Bag Printer